I-Ultrasonic High-Shear In-Line Mixers - I-Hielscher Ultrasound Technology
I-Ultrasonic High-Shear In-Line Mixers
Ama-ultrasonicators aphezulu kakhulu wezinqubo zokuxuba okusemgqeni anikela ngezinzuzo ezahlukahlukene uma kuqhathaniswa nama-homogenizers ajwayelekile e-colloid. Ukusebenzisa i-ultrasound enamandla amakhulu ukuxuba kunika amandla ama-Hielscher ultrasonic high-shear mixers ukuthi akhiqize ukumiswa okwesikhashana kwe-colloidal kanye ne-emulsions ku-nano-range. Ama-homogenizers asemgqeni we-Ultrasonic angacubungula noma yiliphi ivolumu kanye ne-viscosity futhi angakwazi nokusingatha izinhlayiya ezilimazayo kakhulu.
Ukuxuba okuphezulu kwe-In-Line ne-Power Ultrasound
I-homogenization emgqeni wokumiswa okuqinile kwe-liquid-liquid noma liquid-liquid kuyisicelo esidingekayo ekukhiqizeni izinto eziningi nezimpahla. Ama-mixers e-Ultrasonic high-shear inline asetshenziswa ezimbonini eziningi kufaka phakathi ukukhiqizwa kopende, izingulube & uyinki, ama-polymers & inhlanganisela, okokubasa, ukudla & iziphuzo, izithasiselo zokudla okunempilo, imithi yokwelapha, izimonyo & ukunakekelwa komuntu siqu phakathi kwabanye. I-Ultrasonic high-shear inline homogenizers isetshenziselwa ukuxuba, ukusabalalisa, ukuhlukanisa izinto, ukumisa amandla, ukumanzisa, ukuncibilikisa kanye nokugaya izinhlayiya ezincane. Amandla athile we-ultrasonic high-shear inline mixers yikhono lokucubungula okuthembekile kwe-nano-materials (isb. Nano-dispersions, nano-emulsions).
Le vidiyo ibonisa ukuhlakazeka kwe-ultrasonic kombala obomvu kusetshenziswa i-UP400St ngophenyo lwe-22mm.
Ukusakazwa kombala obomvu we-Ultrasonic usebenzisa i-UP400St
Qaphela kwethu Inqubomgomo yobumfihlo.
I-Ultrasonic high-shear inline mixers iphatha amavolumu aphezulu, ukugxila okuphezulu okuqinile kanye nezinhlayiya ezilimazayo.
Ngabe Umsebenzi Wokuhlanganisa i-Ultrasonic High-Shear usebenza kanjani?
Ukuhlanganiswa kwe-high-shear kwe-Ultrasonic kanye ne-homogenization kusekelwe esimisweni sokusebenza se-acoustic cavitation. Lapho uketshezi lwenziwa lukhuliswe ngamandla amakhulu, amagagasi e-ultrasound asakazeka ngokusebenzisa okuphakathi ketshezi futhi aholele ekushintshaneni kwemijikelezo ephezulu yengcindezi (ukucindezela) kanye nengcindezi ephansi (ye-rarefaction). Ama-ultrasonicators amandla amakhulu asebenza kumvamisa wokuzungeza. 20kHz. Lokhu kusho ukudlidliza okungama-20 000 ngomzuzwana. Ngesikhathi somjikelezo onengcindezi ephansi, amagagasi e-ultrasound aqine kakhulu enza ama-bubble amancane wokugcwala kuketshezi. Lapho ibhamuza le-cavitation lifinyelela usayizi lapho lingenakuthola khona amanye amandla, liwa ngamandla ngesikhathi sokujikeleza kwengcindezi enkulu. Lesi simo se-bubble implosion saziwa ngaphansi kwegama lobuchwepheshe elithi "cavitation". Ngesikhathi sokufakwa okuphezulu kakhulu (cishe i-5,000K) nezingcindezi (cishe i-2,000atm) zifinyelelwa endaweni. Ukufakwa kwebhamu le-cavitation kuphinde kukhiqize amajetshi wamanzi afinyelela ku-280m / s velocity. (bheka uSuslick 1998)
Lawa mandla amakhulu futhi aphazamisayo ahlinzeka ngamandla anele okugaya, okususa ubungako bamanzi kanye nokusabalalisa izinhlayiya oketshezini futhi aguqule ama-mixer e-ultrason high-shear kubuchwepheshe be-processing par excellence. Ngakho-ke, zisetshenziswa njengenkambiso yokwenziwa nokusebenza, ikakhulukazi emikhakheni lapho i-nanotechnology ne-nano-materials zidlala indima ebalulekile ekusebenzeni nasezingeni lomkhiqizo.
Inqubo Ephakeme Namandla Amandla nama-Ultrasonic Mixers
Amaprosesa we-Hielscher ultrasonic anokusebenza okuvelele kwamandla ka> 85%. Lokhu kunciphisa izindleko zikagesi zokusebenza futhi kuholele ekusebenzeni okuphezulu kokucubungula. UKusters et al. (1994) baqhubeka esifundweni sabo sokuthi ukwahlukaniswa kwe-ultrasonic kusebenza ngokulinganayo njengokugaya okuvamile.
Ngokusebenzisa ingcindezi nokwenza ngcono inqubo ye-ultrasonic, ubuchwepheshe bokuxubana be-ultrasonic buvame ukudlula izindlela ezijwayelekile zokuxuba ezinjenge-rotary blade mixers, ama-high-pressure homognenizers noma izigayo zebhola kude kakhulu.
Kwesinye isifundo, uPohl et al. (2004) uqhathanise ukusebenza kahle kokuhlakazwa kwe-ultrasonic kwe-silica nezinye izindlela zokuxuba okuphezulu, njenge-IKA Ultra-Turrax (Rotor-stator-system). Pohl et al. kuqhathaniswa nokwehliswa kosayizi wezinhlayiyana ze-Aerosil 90 (2% wt) emanzini kusetshenziswa i-Ultra-Turrax (rotor-stator-system) ezindaweni ezahlukahlukene naleyo ye-Hielscher ultrasonic high-shear mixer UIP1000hd ne-flow cell kwimodi eqhubekayo. Ukutadisha kukaPohl et al. kuphetha, ukuthi "kumandla athile e-EV ultrasound asebenza kangcono kune-rotor-stator-system" nokuthi "imvamisa esetshenzisiwe ye-ultrasound ebangeni elisuka ku-20 kHz kuze kufike ku-30 kHz ayinamphumela omkhulu kunqubo yokusabalalisa."
Kungani ama-Ultrasonic High-Shear Inline Mixers?
izinhlayiya ze-micron- ne-nano
nganoma iyiphi ivolumu
ingacubungula ama-viscosities aphakeme kakhulu
ingakwazi ukusingatha izinhlayiya ezilimazayo
ngaphandle kwezingxenye ezihambayo (azikho i-rotors, izindwani)
ngaphandle kwemidiya yokugaya (abukho ubuhlalu)
Ukuncishiswa kosayizi wezinhlayiyana ze-Ultrasonic we-calcium hydroxyapatite (30% okuhlushwa okuqinile, ama-150Ws / g US)
I-UIP4000hdT, i-4000watts enamandla ye-high-shear mixer yokucubungula okusemgqeni, isb. ukugaya okumanzi, ukuhlakazeka, ukukhipha amandla nokuqedwa kokumiswa kwe-colloidal.
Ungayitholaphi I-Ultrasonic High-Shear In-Line Mixer Yakho?
I-Hielscher Ultrasonics ingumlingani wakho othembekile uma kukhulunywa ngezinqubo ze-sonication ezisebenza kakhulu, njengokugaya i-ultrasonic, ukusabalalisa, ukumisa nokuqedwa. I-Hielscher's ultrasonic high-shear inline mixers ingaletha ama-amplitudes aphakeme kakhulu. Amplitudes afika ku-200µm angaqhutshwa ngokuqhubekayo ngokuqhubekayo ekusebenzeni kwe-24/7/365. Ngama-amplitudes aphakeme kakhulu, ama-sonotrode e-ultrasonic enziwe ngokwezifiso ayatholakala. Izinhlobonhlobo ze-ultrasonic inline reactor nezinye izesekeli ezengeziwe zivumela ukusethwa okuhle kohlelo lwakho lokusebenza lwe-ultrasonic (isb., Inline emulsification, ukunciphisa usayizi wezinhlayiyana, kanye ne-homogenization).
Isoftware ehlakaniphile, imenyu yedijithali ngokukhonjiswa kokuthinta, ukuqoshwa kwedatha okuzenzakalelayo, kanye nesilawuli kude sesiphequluli kuyizici ze-homogenizers ze-Hielscher ultrasonic eziphakeme kakhulu ezenza ukusebenza kube lula kakhulu futhi kube lula. Ubuchwepheshe be-clean-in-place (CIP) benza ukusetshenziswa kwe-ultrasonic high-shear mixer kube lula. Ukuqina, ukuthembeka, ukufakwa okulula nokusebenza kanye nokugcinwa okuphansi kuyizinto ezingeziwe, ezenza kube lula ukusebenza kwansuku zonke ngama-Hielscher ultrasonicators.
Xhumana nathi manje ukuze ufunde kabanzi mayelana nokuthi i-ultrasonic high-shear inline mixer ingakuthuthukisa kanjani ukucubungula kwakho kwe-solid-liquid and liquid-liquid systems! Ithimba lethu eliqeqeshwe kahle nelinesikhathi eside lizojabula ukukusiza ngolwazi oluthe xaxa mayelana nezicelo namanani entengo.
Ithebula elingezansi linikeza isibonakaliso somthamo wokucubungula we-ultrasonicators wethu:
1 kuya ku-500mL 10 kuya ku-200mL / min UP100H
10 kuya ku-2000mL 20 kuya ku-400mL / min UP200Ht, UP400St
0.1 kuya ku-20L 0.2 kuya ku-4L / min I-UIP2000hdT
10 kuya ku-100L 2 kuya ku-10L / iminithi I-UIP4000hdT
na 10 kuya ku-100L / iminithi UIP16000
na sikhulu yinhlanganisela UIP16000
Xhumana nathi! / Cela Us!
Cela ulwazi oluthe xaxa
Uyacelwa ukuthi usebenzise ifomu elingezansi ukucela ulwazi olungeziwe mayelana nezinhlelo zokusebenza ze-ultrasonic, izinhlelo zokusebenza nentengo. Sizokujabulela ukuxoxa ngenqubo yakho nawe futhi sikunikeze uhlelo lwe-ultrasonic oluhlangabezana nezidingo zakho!
Idolobha, i-State, i-ZIP Code
I-Hielscher Ultrasonics ikhiqiza ama-homogenizers asebenza ngokusebenza okuphezulu wokuxuba izinhlelo, ukusabalalisa, ukumisa nokukhipha ilebhu, umshayeli kanye nesikali sezimboni.
Izincwadi / Izikhombo
Ukuhlanganiswa kwe-Ultrasonic kwe-Asphalt Rejuvenators
Ama-homogenizers Wokusebenza Okuphezulu
SonoStation – Isethaphu yesixazululo se-Hielscher's Ultrasonic Pump Solution Setup
Ukuhlanganiswa Okuphezulu kwe-Shear ne-Ultrasonics
I-Oxyde ye-Graphene – I-Ultrasonic Exfoliation nokusabalalisa
Ultrasonic Ukuhlakazwa Graphene
Ukusebenza okuphezulu kwe-ultrasonics! Uhla lomkhiqizo kaHielscher lumboza isibonisi esigcwele kusuka ku-compact lab ultrasonicator ngaphezulu kwamayunithi ebhentshini-phezulu kuya ezinhlelweni ezigcwele zezimboni ze-ultrasonic.
Sizojabula ukusebenzisana nawe.